CPA oo ka codsatay SONSAF inay joojiso dhibaato shaqaaleheedu ku hayo difaacayaasha xuquuqal insaanka
Friday April 27, 2018 - 16:52:15 in Wararkii u danbeeyay
Hargeysa- Ururka la yidhaahdo Xarunta Daraasaadka Siyaasadda ayaa ku eedeeyey shaqaale ka tirsan SONSAF inay khatar ku hayo xuquuqda aadanaha ee Somaliland.
War ay soo saartay CPA ayaa sidan u dhigan:
Xarunta Daraasaadka Siyaasadda (Centre for Policy Analysis) waxaay ka codsanaysaa daladda SONSAF inay kala cadayso mawqifkeeda ku saabsan amniga iyo shaqada difaacayaasha xuquuqal insaanka Somaliland. Markaanu aragnay cabasho qoraal ah oo uu soo gudbiyay difaace xuquuqal insaan, islamarkaana aanu lafo-gurnay qoraalka cabashadu ku saabsan tahay, waxaanu si wayn uga walaacsanahay qoraal aan la aqbali karin oo khatar ah oo uu qoray sarkaal sare oo ka tirsan SONSAF oo si furan ugu weeraray baraha bulshada difaacayasha xuquuqal insaanka, sidoo kalena sameeyey sheegashooyin khatar gelinaya noloshooda. Sheegashooyinku waxaay sidoo kale waxyeelo u gaysanayaan xuquuqal insaanka laftiisa. Waxaanu ognahay inaanay ahayn markii u horaysay ee sarkaalkaasi uu sidan oo kale u majo xaabiyo xuquuqal insaanka isaga oo sheeganaya inuu metelo SONSAF.